Xanaanada - fasalka 5aad waxay u wareegayaan waxbarashada durugsan November 23 | Updates
Xanaanada - fasalka 5aad waxay u wareegayaan waxbarashada durugsan November 23
Waalidiinta/Daryeeleyaasha sharafta leh,
Fariintani waxay xambaarsan tahay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan isbedel qaabka waxbarashada ee dhammaan iskuulada degmada 279.
Guddiga waxbarashada waxay ansixiyeen dalabkaygii ahaa in dhammaan ardayda loo bedelo, xanaanada kahor ilaa fasalka 5aad, waxbarashada durugsan laga bilaabo Isniinta, Nov. 23. Tani waxay saamaynaysaa dhammaan ardayda ku jira dhammaan barnaamijyada iskuulada hoose iyo xarumaha xanaanada.
Kororka dhaqsaha dhaqdhaqaaqa fayraska ee bulshooyinka iskuuladeena u adeegaan waa mid cabsi leh wuxuuna hadda gaaray heer xun. U wareejinta iskuuladeena hoose waxbarashada durugsan si ay ugu biiraan iskuulada sare oo hore loogu wareejiyey waxbarashada durugsan Nov. 9 waxay ku salaysan tahay qorshaha waxbarashada amaanka Minnesota iyo talo soo jeedino ad adag oo aan ka helay waaxda waxbarasha Minnesota iyo Waaxda caafimaadka Minnesota iyo waaxda caafimaadka dadweynaha Hennepin. Intaa waxaa raaca, tirada maqnaanshaha shaqaalaha waxay abuurtay cabsi weyn oo ku saabsan haysashada shaqaale nagu filan si ay wax u dhigaan anagoo dhinaca kalena ilaalinayna hab maamuuska caafimaadka iyo badbaadada (gaar ahaan irada iyo kala fogaanshaha). Marka la soo koobo, kuma hayno dhismayaasheena shaqaale ku filan oo waxbara kormeerana ardayda si loo ilaaliyo talaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada. Amaan maaha in la sii wado waxbarashadii fasalada. Xaqiiqdii, cabsida shaqaale ee ka jirta iskuulka hoose ee Garden City waa mid soo dedejinaysa in Garden City u wareego waxbarashada durugsan isla hadda.
Shaqsi ahaan, waxaan rabaa inaan idinla wadaago niyad jabkayga inaan talaabadan qaadno. Waan ogahay in ardaydu jecelyihiin inay iskuulka joogaan iyo weliba saaxiibadood. Waan ogahay in shaqaaleheenu door bidi lahaayeen isdhexgalka caawinaya xidhiidhka wanaagsan ee ardayda iyo macalimiinta. Waan ogahay in arday badani aad wax u bartaan markay fasalka la joogaan macalinkooda.
Sidaa si la mida, waxaa ii cad inayna amaan ahayn in caruurta la geeyo iskuulka la geeyo waxbarasho toosa anoo aanan hubin inaan u helayno shaqaale ku filan oo u shaqeeya. Yoolkaygu maalinkasta waa in ardayda iyo shaqaaluhuba helaan bay’ad shaqo iyo waxbarasho oo aamin iyo caafimaad leh, waana ka xumahay in Koronaha raad intaa le’eg ku yeeho awoodeenii aan yoolkaas ku gaari lahayn.
Waad ku mahadsan tahay waxkasta oo aad qabanaysid oo aad ku caawinaysid ardaydeena iyo shaqaaleheena inta lagu jiro waqtigan adag.